Bolivia : Fikambanana Twitter · Global Voices teny Malagasy
Bolivia : Fikambanana Twitter
Voadika ny 10 Marsa 2008 19:28 GMT
Mitombo tsikelikely ny mpampiasa Twitter boliviana, ary nahazo tosika lehibe ry zareo tamin'ny fanamboarana ny pejy TwittBo [es], manantena ny hanome dokam-barotra be be kokoa ity fomba fifandraisana efa be mpakafy ity. Fanampin'izany dia nisy koa Facebook niforona mba hikambanan'ny mpanao twitter boliviana. Roa amin'ny mpamorona, Ricardo Zuna (@masaco) sy Diego Wara Fernandez (@teufelabgott) dia namaly fanontaniana vitsivitsy momba ity fikambanana vaovao ity.
Global Voices : Avy aiza no niavian'ilay hevitra Twittbo ?
Diego Fernandez: Hevitra niforona tamin'ny twitts tamiko sy i @masaco (Ricardo) izy ity. Vao haingana izahay no nifankahita ary nahita fa manana hevitra izahay azo aseho izao tontolo izao. Na dia tamin'ny TwittMX ary no nahitanay ny hevitra, ity tetikasanay ity dia te handeha lavitra kokoa, fa tsy ho fivoriana Twitter fotsiny. Taty aoriana i Sebastian (Molina) dia nilaza fa nanana hevitra nitovy an'io, ary satria mila fifanampiana foana, dia nanapaka hevitra izahay fa ho isan'ny ekipa koa izy.
Ricardo Zuna : Azonay tamin'ny fifanakalozana twitts miaraka tamin'ny @TeufulAbbgot ilay hevitra, hitanay fa izahay roa lahy ihany no mpampiasa twitter boliviana ary hitanay fa ilaina ny namorona fikambanan'ny mpampiasa an'io teknolozia io. Nikarokaroka ilay hevitra izahay teo amin'ny herinandro teo, dia naka tahaka ny TwittMX kely, dia nanapaka hevitra fa avoaka ny blog ny 29 Janoary 2008. Taoriana kelin'ny namoahana io blaogy io dia nifandray tamin'i Sebastian Molina, mpamatsy izahay mba handraisany anjara an'ity tetikasa makadiry be ity. Izy koa mazoto be amin'ny twitter.
GV : Dia inona no heverinareo atao amin'ilay takelaka aterineto ?
DF : Raha izao izahay dia mila fanampiana avy amin'ny mpitoraka blaogy boliviana mba hanombohana fifanakalozana rohy sy fanasana. Mbola tsy betsaka noho ny 30 ny mpikambana izao, fa kosa fantatray fa manohana anay ry zareo amin'ny alalan'ny hafatra sy imailaka alefany. Amin'ny manaraka dia manantena izahay fa i twitter dia ho fitaovana fifanankalozan-kevitra, blaogy sy zavatra hafa koa, fa kosa tsy fifanaovanay fotsiny microblogging.
RZ : Amin'izao fotoana izao izahay dia mifantoka amin'ny fampielezana an'i twitter mba ho maro kokoa ny mpampiasa azy eto Bolivia, satria fomba fifanankalozana mbola vao sy vitsy mpampiasa io eto. Mitady hevitra avy amin'ny mpampiasa twitter sy namanan izahay, ary mihevitra ny hanao fivoriam-be Twitter eto Bolivia, mbola tsy misy daty aloha, ary miankina ihany koa amin'ny fitomboan'ny mpampiasa eto Bolivia.
GV : Inona koa no azo atao eto Bolivia miaraka amin'ny “microblogging” na ny “twitts”? Afaka ampiasaina amin'ny zavatra hafa noho ny fialamboly sy sosialy ve ?
DF : Ny tena fototr'i Twitter dia ny sosialy, fa tokony kosa hampiasaina io mba hifandraisan'ny Boliviana kokoa, ary tsy lasa miankina be loatra amin'ny MSN MEssenger ry zareo, fa kosa misy fomba hafa hifandraisana sy hilazana hevitra ary koa hamatorana hevitra toa ny antsoinay hoe “akanin-kevitra”.
RZ : Fomba fampiasana mahaliana ahafahana mampiely vaovao aty Bolivia miaraka amin'ny twitter dia amin'ny lohanteny twitt toa ny CNN, La Tercera, Global Voices, Ahora Bolivia sy ny hafa koa. Raha ny momba ny fampiasana hafa an'i Twitter, tsy misy fetra afa-tsy ny eritreritra, hitantsika fa misy koa fampiasana an'i Twitter amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana, fikambanana mpianatra, ary fivarotana mampiasa izy ity ho fampielezan-kevitra anatiny sy fanaovana dokam-barotra ho an'ny marika, ary koa ho diarin'olon-drery, etc.
GV: Mahatadidy fomba fampiasa an'i Twitter mahaliana sy mampihomehy ve ianao?
RZ : Mahaliana fa ahitanao olona marobe ao amin'i twitter : Evo Morales, Barack Obama, Fidel Castro, Steve Jobs, lava be ny lisitra, ary zava-mahaliana lazainy ao dia ny lazain'iza na iza ihany – inona izao no ataony amin'izao fotoana izao anatin'ny litera 140.
Nosoratan'i Eduardo Avila
io hitako fa tena ESPOIR BE IO TWITTER IO!
IMAGINE de Tuléar à Diego tu Twittes tu Twittes sur les cyclones et sur tout
tu Twittes puor le prix ‘dun texto!!
10 Marsa 2008, 21:00